အမှန်တရားကို ရောက်အောင် ပြောနိုင်တဲ့ အင်အားက တော်တော်နည်းပါးတယ် – Nyang Media
ငြမ်း / တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဒေါ်ခင်မြမူ
သက်ငယ်မုဒိမ်းမှာက ကလေးတွေက စိတ်ဒဏ်ရာ ပိုရတယ်။ မဲဇလီက ကလေးမလေးဆိုရင် ညဘက် ကြောက်တယ် ကြောက်တယ်လို့ ထထအော်တယ်။ ငိုချင်လည်း ငိုနေတယ်။ ရယ်ချင်လည်း ရယ်နေတယ်။ စိတ် …
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မင်းလှမြို့နယ် ဆားတောင်ကျေးရွာ အလယ်တန်းကျောင်းခွဲတွင် ဖြစ်ပွား ခဲ့သည် ဟု ဆိုသော သက်ငယ် မုဒိမ်းမှု ဖြစ်စဉ်အတွက် တရားလိုဘက်မှ လိုက်ပါ ကူညီ ဆောင်ရွက် ပေးနေ သည့် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဒေါ်ခင်မြမူကို ငြမ်းမီဒီယာ က မင်းလှမြို့ရှိ ၎င်း၏နေအိမ်တွင် သွားရောက် တွေ့ ဆုံ မေးမြန်းထားသည်။ ဒေါ်ခင်မြမူသည် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့ သည့် သက်ငယ်မုဒိမ်း (၅) မှုကို ကျူးလွန်ခံရသူများ ဘက်မှ ရပ်တည်ပြီး ဥပဒေအကျိုးဆောင် အဖြစ် လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ဆားတောင်ရွာက သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုမှာ တရားလိုဘက်က ဆရာမ လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခု အမှုဘယ်အခြေအနေကို ရောက်နေတယ်ဆိုတာ သိပါရစေ။
DKMM – ကျွန်မတို့က တရားလိုဘက်က လိုက်ပါဆောင်ရွက်တယ် ဆိုပေမယ့်လည်း တိုက်ရိုက် ဆောင်ရွက်လို့ မရဘူးလေ။ တရားလို ဘက်ကနေ ဥပဒေအရာရှိ ရှိတယ်။ နိုင်ငံတော် ဥပဒေ အရာရှိ လက်အောက်ကနေ လိုအပ်ချက်အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုပါဆိုပြီး ခွင့်ပြုချက် တောင်းပြီး လိုက်ရတာ ပါ။ ပထမဆုံး စစချင်းက (၃၁ . ၁ . ၂၀၁၈) မှာ အမှုစဖြစ်တယ်လို့ သိသော်လည်း (၅ . ၁ . ၂၀၁၈) မှာ ထွေအုပ်ကနေ စာရေးတစ်ယောက်က ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှ ကလေးတွေက ဆင်းလဲဆင်းရဲတယ်။
ပြောတဲ့နေရာမှာလည်း ဆင်ပြောတာနဲ့ တကယ်ဖြစ်တာကိုပြောတာ မတူပါဘူး။ ကျွန်မ အခုတွေ့ခဲ့ တာတွေ မှာတော့ မှားယွင်း စွပ်စွဲတာ မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ ဒီကလေးမလေး အနေနဲ့ လည်း လိမ်လည် စွပ်စွဲတာမျိုးလို့ မထင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်ဆို …
ရှေ့နေလည်း ငှားနိုင်တဲ့အနေအထား မရှိလို့ တတ်နိုင်သမျှ ကူညီပါလို့ ထွေအုပ်စာရေး တစ်ယောက်က လာအပ်တယ်။ သက်ငယ် မုဒိမ်းက သရက်ထိလိုက်ရမယ်။ သရက်ထိဆိုရင် ကိုယ့်အနေနဲ့ အသက် အရွယ်အရပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျန်းမာရေးအရပဲ ဖြစ်ဖြစ် လိုင်းကား မစီးနိုင် ဘူး။ ဆိုင်ကယ်လည်း မစီးနိုင်ဘူး။ ကားနဲ့သွားရမယ့် အနေအထားဆိုတော့ ကားတစ်ခေါက်ကို ကျပ်ခြော က်သောင်း လောက် ပေးရတယ်။ အဲဒီလိုပေးရတော့ ငါလည်း မတတ်နိုင်ဘူး။ ပရဟိတအဖွဲ့ကို အကူအညီတောင်း ရမယ်ဆိုပြီး ဒေါက်တာရဲထွန်းဇော်တို့ ရှိတယ်။ ဒီအမှုအရင်ကလည်း သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု လိုက်ထားတာ (၄) ခု ရှိတယ်။ (၅ . ၁ . ၂၀၁၈) ရက်နေ့က ဆရာ့ဆီ ခေါ်သွား တာ။ ဆရာရေ တတ်နိုင်သမျှ အကူညီပေးပါဦးလို့ ဆိုတော့ ဆရာကလည်း ငွေကြေးအလှူခံပြီး သက်ငယ်မုဒိမ်းကို လိုက်ရတာပါ။ ဥပဒေအရာရှိ လက်အောက်က လိုက်ရတာ။ စစ်တော့လည်း ဥပဒေ အရာရှိ ကိုယ်တိုင် စစ်တာ။ သက်သေတွေ ခေါ် ပြန်တော့ လည်း ကိုယ့်ကားနဲ့ တပါတည်း လိုက်ဖို့ ခေါ်ရတယ်။ သက်သေတွေ ကို လည်း ကျမ်းစူး မခံနဲ့၊ အမှန်တိုင်းလေး ထွက်ပေးပါဆိုပြီး မေတ္တာရပ်ခံတယ်။ ကလေးတွေ ရဲ့ သဘာ၀ ကြောက်တော့ ပြောဝံ့အောင် သေချာလေး မေးပေးရ တယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – အမှုဖြစ်စဉ်က တစ်နှစ်ကျော်ကြာလာပြီးတော့ အခုချိန်ထိ အမိန့်မချနိုင်သေးဘူး၊ ကြန့်ကြာနေတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေများ ရှိလို့လဲ။
DKMM – စွပ်စွဲခံရသူမှလည်း သူရဲ့အခွင့်အရေး ရှိတယ်လေ။ ရဲစက္ကူနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဖို့ တောင်း တဲ့အခါကျတော့ သရက် ခရိုင်တရားရုံးအနေနဲ့ ငြင်းပယ်တယ်။ အဆင့်ဆင့် တက်တဲ့ အခါ (၆) လ၊ (၇) လကြာမှ ပြန်ကျလာတယ်။ နောက်တစ်ခါ တရားသူကြီးရဲ့ မေးမြန်းချက်တွေ က စွပ်စွဲ ခံရသူရဲ့ အခွင့်အရေးကို ထိခိုက်တယ် ဆိုပြီး ရုံးပြောင်းလျှောက်တယ်။ အဲဒီလို ရုံးပြောင်းလျှောက်တဲ့ အတွက် ကြန့်ကြာတယ်လို့ ဖြစ်လာတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ဒီအမှုက ဆရာမအနေနဲ့ ရှေ့နေ လိုက်တဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်း (၅) မှုမြောက်လို့ သိရတယ်။ အဲဒီလိုလိုက်တဲ့အခါ ဘာအခက်အခဲ တွေ ကြုံတွေ့ရလေ့ ရှိပါသလဲ။
DKMM – သက်ငယ်မုဒိမ်းမှာက ကလေးတွေက စိတ်ဒဏ်ရာ ပိုရတယ်။ မဲဇလီက ကလေးမလေးဆိုရင် ညဘက် ကြောက်တယ် ကြောက်တယ်လို့ ထထအော်တယ်။ ငိုချင်လည်း ငိုနေတယ်။ ရယ်ချင်လည်း ရယ်နေတယ်။ စိတ်ကိုထိခိုက်သွားတာမျိုးရှိတယ်။ ရေနံမက ကလေးမလေးဆို (၄) စင်တီမီတာ ပြဲသွားတာကြီးကို ချုပ်ရတာ။ သားအိမ်ကို ထုတ်ရတဲ့ အနေအထားမျိုး ဖြစ်ပြီး ကလေး မလေးက အမေမရှိတော့ အခုလူမှုဝန်ထမ်း ရောက်သွားပြီး မိဘနဲ့လည်း မနေရဘဲ သူစိမ်းတွေနဲ့ နေရတာဆိုတော့ သူတို့ဘဝမှာ ဒီဒဏ်ရာကြီးက ပျောက်ဖို့ တော်တော်ခဲယဉ်းပါတယ်။ နောက် စလင်းက ကလေးမလေးဆိုရင်လည်း ကလေးက အမြွှာပူး မွေးထား တယ်။
တစ်ကယ့်အမှန်တရားက ဒါကြီးတွေ့ရဲ့သားနဲ့ ရုံးရောက်တော့ ရုံးအတွေ့အကြုံ မရှိတာရယ်၊ ကြောက်တဲ့ လန့်တဲ့ စိတ်တွေရယ်၊ ကလေးဆိုတဲ့ ငယ်ရွယ်တဲ့ စိတ်တွေ ကြောင့် အမှန်တရားကို ရောက်အောင် ပြောဖို့ …
ကလေးတွေ အဖေကလည်း မုဒိမ်းသမား ဖြစ်တယ်။ ကလေးအမွှာပူးကိုလည်း မွေးရတဲ့အခါကျတော့ တော်တော်ကိုပဲ ဒုက္ခ ရောက် ရတယ်။ အများအားဖြင့် သက်ငယ်မုဒိမ်း ကျူးလွန်ခံရတဲ့ ကလေးတွေက ဆင်းဆင်းရဲရဲတွေ များတယ်။ ငွေကြေးချို့တဲ့ တယ်။ လည်လည်ဝယ်ဝယ် မပြောတတ်တာတွေပေါ့။ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ရောက်အောင် မပြောနိုင်တဲ့ အနေအထားတွေ အများကြီး တွေ့ရပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – လက်ရှိဆားတောင်အမှု ကြန့်ကြာနေတာကတရားလို ဘက်က ပျက်ကွက်နေတာကြောင့် ရုံးချိန်းတွေ ကြန့်ကြာနေတာ ဖြစ်တယ်လို့ စွပ်စွဲခံရသူရဲ့ ရှေ့နေက ပြောပါတယ်။
DKMM – ကျွန်မတို့ဘက်ကတော့ မလွှဲမကင်းနိုင်တဲ့ အကြောင်းက လွဲရင် (ဥပမာ ကျောင်းဆရာတွေကို စစ်ရင် တစ်ယောက်က သင်တန်းသွားတယ်။ တစ်ယောက်က စာမေးပွဲရက် ဆိုတာမျိုး အဲဒီလို အကြောင်းအရာမျိုးကလွဲလို့) သီးခြားပျက်ကွက်တာတော့ မရှိပါဘူး။ သက်သေတွေ အနေနဲ့ ကလည်း ကလေးတွေပေါ့နှော်။ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု သိတာ ထပ်နေတာမျိုးဆိုရင် ပယ်ပစ်တာမျိုး ရှိပါတယ်။ သက်သေက အယောက် (၂၀) ရှိတယ်။ ပယ်ပစ်တာကို (၁၀) ယောက်ရှိတယ်။ (၇) ယောက် စစ်ပြီးပြီ။ ကျန်တာ (၃) ယောက်လောက်ပဲ ကျန်မယ်။ သက်သေကျောင်းဆရာတွေကလည်း အမှုကို သေချာမသိတော့ ပယ်ဖို့လုပ်လိုက်တော့ ဥပဒေ အရာရှိက ဆရာနှစ်ယောက်တော့ စစ်လိုက်မယ်လုပ်တော့ တစ်ယောက်က စာမေးပွဲရှိနေတယ်။ တစ်ယောက်က သင်တန်း သွားနေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ရုံးပြောင်းလျှောက်တဲ့ အနေအထား ဖြစ်သွားတာ။ တရားလို အနေနဲ့က မြန်မြန်ပြီးချင်တာပေါ့။ ပိုပြီး ချင်တာပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ကလေးတွေက စိတ်ဒဏ်ရာ အမြဲတမ်း ရနေတာလေ။ ဒီစကားတွေက ပထမဆုံး ရဲမှာ တစ်ခါ စစ်တယ်။ ရဲမှာစစ်ပြီး ရုံးမှာတစ်ခါစစ်တယ်။ ရုံးပြောင်းဆိုရင် တော်တော်ကို ဝေးသွားပြီ၊ ဘာလို့လဲဆိုရင် စိတ်ဒဏ်ရာတွေ ရတာ ပေါ့။ ကလေးတွေက ဒါကြီးကို မေ့ချင်နေတာကို ပြန်ပြန်အစဖော်ပေးသလို ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ အမှန်တရားကို ရောက်အောင် ပြောနိုင်တဲ့ အင်အားက တော်တော်နည်းပါးတယ်လို့ ထင်တယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ဒီလိုအမှုတွေ လိုက်တဲ့အခါ တရားရုံးတွေမှာရော ဘယ်လို အခက်အခဲတွေ ရှိလဲ။
DKMM – တရားရုံးတွေမှာက ဝန်ထမ်းပိုင်း တရားသူကြီးတွေ မပြည့်စုံဘူး။ မပြည့်စုံတော့ တစ်ယောက်တည်းမှာ ပြုံစစ်ရတယ်။ အမှုတွေများတော့ စောင့်ရတယ်။ အဲဒီလိုတွေ ရှိတယ်။ တစ်ခါတလေ ညနေ (၆) နာရီ လောက်ထိတောင် စစ်ကြတယ်။ ဝန်ထမ်း ပိုင်း မပြည့်စုံတာရှိသလို သက်သေတွေ ခေါ်ရတဲ့အခါမှာ အချို့က ရုံးကြောက်တော့ လှည့်ပတ်နေတာ။ နောက်တစ်ခါကျတော့ ကာယကံရှင်တွေ ကိုယ်တိုင် ကကို ကိုယ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်ကို ဘယ်လို ပြောရမလဲဆိုတာကို နားမလည်၊ မသိတဲ့ အနေအထားတွေ ရှိတယ်။ ဒီလိုစော်ကား ခံရတယ်ဆိုတာ တစ်အချက်က ဆင်းရဲတာ။ နှစ်အချက် က ပညာမတတ်တာ။ နောက်တခါ ကလေးတွေ။ သက်ငယ် မုဒိမ်းဆိုတာ ဆင်းရဲတဲ့ ကလေးတွေ ဖြစ်တာ။ ကျွန်မ အနေနဲ့ လည်း တတ်တဲ့ပညာနဲ့ နိမ့်ပါးတဲ့ ကလေးတွေ အတွက် ငွေကြေးအခမဲ့ ရပ်တည်ကူညီ ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။ သက်ငယ် မုဒိမ်းမှု (၅) မှုမှာ ဒီတစ်ခုပဲ ကျန်တော့တာ။ ကျန်တဲ့အမှုတွေ အကုန်ပြီးပြီ။
ငြမ်းမီဒီယာ – စွပ်စွဲခံရသူတွေဘက်ကတော့ ဥပဒေအရ ကာကွယ်ခုခံရေး လမ်းကြောင်းကို သေသေချာချာ ဆွဲထားတာ တွေ့ရတယ်။ တရားလိုဘက်ကရော ဥပဒေအရ စိတ်ကျေနပ်လောက်တဲ့အထိ ရလား။ ဆောင်ရွက်နိုင်လား။
DKMM – မရပါဘူးရှင့်။ ဘာကြောင့်ဆို အမှန်တရားကိုပေါ်အောင် မဖော်နိုင်ကြဘူး။ အမှန်တရားကို ပေါ်ပေါက်အောင် မပြောနိုင်ဘူး။ တစ်ကယ့်အမှန်တရားက ဒါကြီးတွေ့ရဲ့သားနဲ့ ရုံးရောက်တော့ ရုံးအတွေ့အကြုံ မရှိတာရယ်၊ ကြောက်တဲ့ လန့်တဲ့ စိတ်တွေရယ်၊ ကလေးဆိုတဲ့ ငယ်ရွယ်တဲ့ စိတ်တွေ ကြောင့် အမှန်တရားကို ရောက်အောင် ပြောဖို့ဆိုတာက တော်တော်ခဲခဲယဉ်းယဉ်း မေးယူရပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – အမှုမှာ ရဲစက္ကူတောင်းခံတဲ့ကိစ္စအတွက် နေပြည်တော် တရားလွှတ်တော်ထိ စွပ်စွဲခံရသူ တွေဘက်က တက်တဲ့အခါမှာ တရားလိုဘက်က ပျက်ကွက်လို့ ကြန့်ကြာတယ်လို့ စွပ်စွဲခံရသူတွေ ဘက်က ပြောပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စရော ဘာပြောလိုပါသလဲ။
DKMM – အရင်ကတည်းက ဥပဒေအရာရှိ ဥပဒေလမ်းကြောင်းက ရှိပြီးသား၊ တရားလိုသည် နိုင်ငံတော်။ နိုင်ငံတော်က ရှိပြီးသား။ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ နေပြည်တော်ထိ လိုက်မယ်ဆိုရင် ကားငှားခက တစ်ခေါက်ကို တစ်သိန်းခွဲလောက်ကုန်မယ်။ နိုင်ငံတော် ရှိတယ်။ ဒါကြောင့်မလိုက်တာ။ တရားလိုဘက်က မလိုက်လို့ အမှုကြန့်ကြာ တယ်ဆိုတာ မရှိဘူး။ ဘာကြောင့်ဆို နိုင်ငံတော်က တောက်လျှောက် ရှိနေလို့။ မကွေးမှာလည်း ဒီလိုပဲ၊ နိုင်ငံတော် ရှိတယ်လေ။
ငြမ်းမီဒီယာ – သူတို့ဘက်က ပြောတာက သမ္မာန်စာ ဆင့်တယ်၊ တရားလို ဘက်က မလာဘူး။ နောက်တစ်ခါ ထပ်ခေါ်ရတယ်၊ မလာဘူး။ ဒါကြောင့် တစ်ဖက်သတ် အမိန့်ချရတယ်။ ဒါတွေကြောင့် ကြန့်ကြာ တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
DKMM – နှစ်ခါခေါ်ရတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါပဲ ခေါ်ရ တာပါ။ တစ်ခါတည်းနဲ့ သမ္မာန်စာ အတည်ဖြစ်တယ်။ တရားလို သည် နိုင်ငံတော်၊ အနီးကပ် ရှိတယ်လေ။ ဥပဒေအရာရှိတွေသည် ကျွန်မတို့ဆီ လှမ်းမေးတယ်။ ဘယ်နှယောက် စစ်ပြီးပြီလဲလို့ မေးတယ်။ တစ်အချက်က တရားလို ဘက်က နိုင်ငံတော်ရှိတယ်။ နှစ်အချက်က ဆင်းရဲနွမ်းပါးလို့ မသွားဘဲနေတာ။ အဲဒီ အတွက် ကြောင့် ကြန့်ကြာတာ လုံးဝမရှိပါဘူး။ တရားလိုဘက်က မရှိလို့ လျှောက်လဲချက် မပေးရဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ခရိုင် မှာ လည်း ရှိတယ်။ တိုင်းဆိုရင်လည်း တိုင်းဥပဒေ အရာရှိတွေ ရှိတယ်။ နေပြည်တော် မှာ ဆိုလည်း ဥပဒေချုပ်တွေ ရှိတယ်။ ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ပြောရရင် ကျွန်မတို့ လိုက်တယ်ဆိုတာ အပို။ ကိုယ့်လူတွေကိုယ် မှန်မှန်ကန်ကန် ပဲ့ပြင်သွားနိုင် အောင်သာ လိုက် တာ။ အမှန်တကယ်က သူတို့တွေ ရှိပြီးသား။ ပြင်ပ ရှေ့နေတွေ ဆိုတာ ဥပဒေအရာရှိတွေရဲ့ လက်အောက်ကနေ လိုက်ခွင့်ပြုပါ ဆိုပြီး လိုက်ရတာ။
ငြမ်းမီဒီယာ – သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေ အများကြီးလိုက်ခဲ့ဖူးသလို အမျိုးသမီးကိစ္စတွေလည်း လိုက်ပါ ဆောင် ရွက်ခဲ့ဖူးတာ ဆိုတော့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျူးလွန်ခံရသူတွေဘက်က ဘယ် လောက်ထိ မှန်ကန်တယ်ဆိုတဲ့ ရာခိုင်နှုန်းကို တွေ့ခဲ့ရလဲ။
DKMM – မိန်းကလေးမှာမှ ရွာသူလေ၊ ရွာသူတစ်ယောက်က ဒီလိုစွပ်စွဲဖို့ဆိုတာ အင်မတန် ခက်ခဲပါ တယ်။ တစ်အချက်က အရှက်ကွဲခံပြောရတာ။ (၉၉ ဒဿ မ ၉) ရာခိုင်နှုန်းက မမှန်ဘဲ မစွပ်စွဲဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ပြောတဲ့နေရာမှာလည်း ဆင်ပြောတာနဲ့ တကယ်ဖြစ်တာကိုပြောတာ မတူပါဘူး။ ကျွန်မ အခုတွေ့ခဲ့ တာတွေ မှာတော့ မှားယွင်းစွပ်စွဲတာ မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ ဒီကလေးမလေး အနေနဲ့ လည်း လိမ်လည် စွပ်စွဲတာမျိုးလို့ မထင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်ဆို ကျောင်းသူလေး၊ ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးလည်း ဖြစ်တယ်လေ။ သူ့ကို စာသင်တဲ့ဆရာလေ။ အဲဒီဆရာရဲ့သားကလည်း အဲဒီကျောင်းမှာ စာသင်နေတာ။ ဆရာတစ်ယောက်ကို ပြန်စွပ်စွဲတယ်ဆိုတာ သာမန်လူတစ်ယောက်ကို စွပ်စွဲတာနဲ့မှ မတူဘဲနဲ့။
ငြမ်းမီဒီယာ – ဒီအမှုအတွက် ဘာများ သုံးသပ်ပြောကြားလိုပါသလဲ။
DKMM – ကျွန်မကတော့ မှန်ကန်ပြီးတော့ မြန်ဆန်ဖို့ပေါ့။ အဲဒါဆိုရင်တော့ နှစ်ဖက်စလုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ ယူဆ ပါတယ်။
Tags: ကျောင်းသူ, တရားစီရင်ရေး, တရားရုံး, တရားဥပဒေ, မကွေတိုင်း, သက်ငယ်မုဒိမ်း